Eyona mfundi wekhadi le-sd kwifowuni yakho ye-android
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Eyona mfundi wekhadi le-SD kwifowuni yakho ye-Android
Eyona mfundi wekhadi le-SD kwifowuni yakho ye-Android
Ukuba ufuna ukuhambisa ngokulula ulwazi ukusuka kwikhamera yakho ukuya kwifowuni yakho, kuya kufuneka ufune umfundi wekhadi le-SD.
Kodwa okokuqala, kufuneka uqaphele izinto ezimbalwa: kufuneka ube nefowuni yanamhlanje exhasa i-OTG kwaye mhlawumbi ufuna ifowuni enokugcinwa okuninzi, ngakumbi ukuba ufuna ukuhambisa iividiyo ukusuka kwikhamera yakho ukuya kwifowuni yakho.
Ukuba unezo mfuno zigutyungelweyo, funda kuzo.
Kukho iqela labafundi bekhadi le-SD phaya, kodwa eyona nto ibhetyebhetye kwaye icwecwe esiyifumeneyo ...
Eyona ilungileyo: IVogek 3-in-1 USB 3.0 SD Card Reader
Le gadget encinci intle yimela yaseSwitzerland yabafundi bekhadi le-SD. Ixhasa hayi enye, hayi ezimbini, kodwa iindlela ezintathu ezahlukeneyo zokunxibelelana: ine-USB-C yeefowuni zakho zangoku, ine-microUSB yeefowuni ezindala, kwaye ine-USB egcweleyo yeekhompyuter! Ekuphela kwento isilela sisixhobo sombane, kodwa oko kunokuba kuhle kakhulu, akunjalo?
Embindini wale gadget encinci imangalisayo yikhadi le-SD, kodwa kunye nekhadi le-MicroSD, ukuze ufunde ngokulula iifomathi zamakhadi ezahlukeneyo.
IVogek 3-in-1 ixhasa isantya se-USB 3.0, ke ukudluliselwa kuya kukhawuleza ukuba ifowuni yakho ikwaxhasa i-USB 3.0. Ukufumanisa ukuba ifowuni yakho iyayixhasa i-USB 3.0, yijonge nje kumaphepha ethu aneenkcukacha kunye nokukhangela 'i-USB'. Iifowuni ezininzi ezikwinqanaba eliphezulu njenge-OnePlus 6 kunye ne-iPhone X zisaxhasa i-USB 2.0 kuphela, ngelixa ezinye zinje ngothotho lwe-Samsung Galaxy zixhasa isantya se-USB 3.x kwizizukulwana ezimbalwa ezidlulileyo.
Amaxabiso nge- $ 12 nje, ulinganise iinkwenkwezi ezi-4.5 eAmazon kwaye zifumaneka ngemibala emithathu (emnyama, engwevu nesilivere), iVogek 3-in-1 SD ikhadi lokufunda sisixhobo esincinci ekudala usikhangela, kodwa awukwazanga .
Yithenge kwiAmazon apha:
Enye indlela: Anker 2-in-1 USB SD Card Reader
Ukuba awukwazi ukuthembela kwinkampani ongazange weva ngayo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo umfundi wekhadi le-SD yinkampani eyaziwayo neyaziwayo ngokwesiko uAnker. UAnker uswele i-microUSB kunye neendlela ezikhethiweyo ze-USB ozifumana kunye neVogek, kodwa yona apos ngumfundi oqinileyo wekhadi le-USB-C okwangoku nakwixesha elizayo. Ixhasa i-OTG, isantya esiphezulu sedatha ukuya kuthi ga kwi-5Gbps, kunye nenkxaso yamakhadi e-SD kunye namakhadi e-MicroSD.
Umfundi wekhadi lika-Anker naye unokwakhiwa kwe-aluminium eqinileyo kwaye yomelele, yenziwe ukuba ihlale ixesha elide. Kwaye ixabiso lalo liphantsi ngexabiso le- $ 13 nje.
Ividiyo engama-360 ayisebenzi kwi-android
selenium linda de kube yimithwalo yamaphepha
Ubukhulu besamsung galaxy s5 nge-intshi
I-Samsung Galaxy S20 FE vs Galaxy S20: Uyintoni umahluko?
Uvavanyo lokuZenzekelayo loVavanyo lokuSebenza kweReactJS
Ezona meko ze-iPhone 11 zibalaseleyo (2020)
Imowudi yePokemon GO AR + ngoku iyafumaneka kwi-Android, kodwa ifuna iARCore
Ixabiso le-Samsung Galaxy Qaphela i-7 kunye nomhla wokukhutshwa kwiVerizon, AT & T, T-Mobile, Sprint, e-US Cellular
Nasi esinye isizathu sokuba iApple isuse iqhosha lasekhaya elibonakalayo kwi-iPhone 7
I-Adobe Flash Player 11 kunye ne-AIR 3 ngoku kwiNtengiso ye-Android, iSigaba se-3D nitro booster ukuba size kwixesha elizayo
Iapile kunye neeapos Air s Pro kunye neAirPods Pro zombini zithengiswa ngamaxabiso asezantsi ngoku